Taariikhda Ogaden – The Official Website Of Farah Garane
Date: December 27, 2012Author: Farah Garane
SHILAABO:- sedex jeer bay gubatay oo sedexduba gumaysigu gubay labo ka mid ah waxaa lagu gubay duqayn xaga cirka ah waxay leedahay goroon diyaaradeed oo caalami ah kaas oo ay dhistay shirkad ruushka laga leeyahay oo ah tii shidaalka heshay.
Waa magaalo qani ku ah shidaalka salida iyo khayraad badan oo uu ka mid yahay xoolaha nool, waana magaalo dadkeedu ganacsiga ku xiran yahay.
QABRIDAHAR:- oo ah magaalo aad uda wayn ahna meel xarun u ahaanjirtay halgamaayaashii daraawishta ilaa hadana laga arki karo raadkii daraa wiishta.
GODEY:- Waxay mar ahaan jirtay caasimada ogaden hadana ah magaalooyinka ugu wayn uguna hormarsan kana mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan waa magaalo aad udhaqaale badan waxaana la dhihi karaa waa xarunta dhaqaalaha Ogadenia.
DHAGAXBUUR:- oo ah magaalo taarikh dheer ku dhex leh ogaadenya islamarkaana xarun o ahaan jirtay gobanimo doonka Ogadenya ilaa hadana wali ah Xarunta gobanimodoonka marna ahaan jirtay xarunta ganacsiga Ogadenya waa magaalo istaraaji ah aadna muhiim ugu ah dadka Ogaadeenka waxayna ku taalaa bartamaha iyo wadnaha wadanka Ogadenya.
ga.src=(https:’==document.Location.Protocol?’https://:’http://&#8217;)+ ‘stats.go.double click.
Var s= document.getElementsByTagname(‘scrip’);s.parentNode.insertBefore(ga.s);})0
Previous Previous post: Qiso dhamaystiran oo kusaabsan Noloshaada Oo Idil 25 25 25=75